पहेँलो लुगामा खुलेको नोराको जवानी ! – Kavrepati
Home / मनोरंजन / पहेँलो लुगामा खुलेको नोराको जवानी !
admin August 27, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 84 Views
अभिनेत्री तथा डान्सर नोरा फतेही समाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुने गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पछि अर्काे आफ्नो हट तस्बिरहरु आफ्ना फ्यानका लागि शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनको हालै खिचिएको एउटा फोटो निक्कै भाइरल भइरहेको छ ।
नोराको यस तस्बिरमा फ्यानहरुले जमेर प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् । पहिला सामाजिक सञ्जाल बाट दुरी टाढा बनाउने गरेकी नोरा अहिले यहि सामाजिक सञ्जालमा निक्कै सक्रिय रहेकी छिन् । डान्सकी रानी नोरा चाँडै नै फिल्म भुज द प्राइड अफ इण्डियामा देखिदै छिन् ।
निर्देशकको यस्तो हर्कतले रोईन नोरा ! चर्चित बलिउड अभिनेत्री नोरा फतेहीले निर्देशकलाई लिएर दिएको बयानले नयाँ हलचल उत्पन्न भएको छ । उनले हालै अभिनेत्री करीना कपूरको च्याट शो ‘व्हाट्स विमेन वान्ट’ मा आफ्नो क्यारियरसँग सम्बन्धित केहि राम्रा र नराम्रा सत्य कथाहरू शेयर गरेकी हुन् ।
Next विहेको १४ बर्षपछि शहरमा घर किन्न खेत बेचेर खातामा पिस पैसा राखेकै दिन ६४ लाख लिएर प्रेमीसँग श्रीमती भागिन